Eminyakeni yamuva nje yathi chithi saka umsebenzi nokuveza. Ngo amaphephandaba amaningi izimemezelo emisebenzi izikhala kulesi sikhundla. Bambalwa ukuthi ubani Animators. Leli gama zenani. Kusho kwenkululeko umsebenzi umuntu abasebenza ukudalwa opopayi, futhi le ndoda ukubungaza izilaleli, umlingisi waqasha. Ngokuvamile lisho Animators ngubani ahlele amaphathi kanye nemicimbi. Animators abanolwazi ukuthola kunzima. Man, ukujabulisa umphakathi, kumele kube eyingqabavu, esebenzayo, nobudlelwano, bakwazi avale isixuku futhi yokuthola ulimi olulodwa nabantu bobudala obuhlukahlukene. Imisebenzi ingxenye eliyifa layo imincintiswano, izenzakalo, inhlangano imicimbi kanye imidlalo. Spoilt ukubungaza izilaleli - umsebenzi onzima.
Izindawo izithombe imisebenzi
Bobani Animators? Okwamanje umsebenzi Umjabulisi ngokuthi ngaleyo ndlela. Kuphela yena ishintshile hhayi nje kuphela igama kodwa futhi imininingwane. Kuvele nokuveza abanolwazi abasebenza emikhakheni ehlukahlukene ukuzijabulisa, usebenzisa yesimanje elekthroniki. Manje amaqembu izingane okwandile sika. Ukusebenza izingane akulula. Kuyadingeka ukubeka eziningi umzamo ukuze sihlale umbono wazo on ngokwabo hhayi ngizithola. Kodwa ngakolunye uhlangothi, izingane - lena izilaleli ezinokwazisa kakhulu. Akukho omuhle kunokuhleka nenjabulo yezingane. Abenzi be-animation zisebenzisa ezihlukahlukene zokubhukuda ezinemithelela abalingisi abacatshangwayo emsebenzini wakhe. Izingane ikakhulukazi abathanda ukujatshuliswa Clowns. Abenzi be-animation ukwazi lokhu, ngakho-ke beveza eziningi ezihlekisayo izinombolo. zokubhukuda Clown uqinisekise ukuthi ufaka: ekhaleni, iwigi, ibhulukwe, izihlathi abomvu. Abazali uthanda ukushiya izingane zabo amahora ambalwa maphakathi game. Umlawuli umbuzo ukuthi nokuveza ezidingekayo, babuza komunye: "Bobani Animators" Ngemva ukucaciseleka ujabule ukuvumelana ukuphathisa ingane ukuba ochwepheshe abanakekela abashonelwe. Naye izingane ukupenda, sculpt, play, umdanso. Isikhathi esichithwe e izingane ukudlala isikhungo, sihamba nabo kungaqashelwa, futhi abazali bayakwazi ukuya mayelana nebhizinisi yabo.
Abenzi be-animation izivakashi
Ezokuzijabulisa clown futhi ezihambisana nomunye. Kodwa uma unayo ukubungaza abadala ke ukugqoka clown - hhayi ukhetho best. Abenzi be-animation kufanele ahambisane abahambi lonke umzila wabo, kuyilapho babangele isithakazelo kubo bonke ezikhumbuzo nezindawo olunothile. Ukuze lo msebenzi ukukhetha abantu abasha abangenayo izinkinga zezempilo futhi zigcwele amandla kanye namandla. Ngosuku esinalo ukubhekana ukuzijabulisa zabantu kuze kube amahora ayisishiyagalombili noma ngaphezulu. Kodwa iholo oqiniseka ehloniphekile. Kuyathakazelisa ukuthi lolu hlobo lomsebenzi. Emazweni izivakashi, wonke umuntu uyazi ukuthi bangobani labo Animators. Abaningi bathambekele isicelo lo msebenzi futhi ngenxa yokuhlala kanye nokudla ehhotela ikhokhwe. Amasevisi kodokotela konke ukuzijabulisa kuyinto mahhala nokuveza. Ngakho-ke, isikhathi ukuvala unethuba uphumule, ukubhukuda olwandle futhi basebenzisa zonke izinhlelo ezihlinzekwa inkampani ehhotela. Ukuze sisebenze njengenhlangano nokuveza phesheya, kumele ube kahle izilimi eziningana zakwamanye amazwe. Izidingo zokwamukela okusezingeni eliphezulu. Ngakho-ke, akubona bonke abantu ungafaka isicelo salokhu umsebenzi ezithakazelisayo.
Reactivity kwengqondo - Iyini?